मेरो भनाइ- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
गत भदौ ४ गते प्रकाशित ‘योग्यताको प्रश्न उठेकालाई नै सिफारिस’ शीर्षक समाचारका सम्बन्धमा मेरो निम्न स्पष्टीकरण पेस गर्छु  ।
१. तात्कालिक सोभियत संघ, हाल युक्रेनको खार्कोभ मेडिकल इन्स्टिच्युटबाट सन् १९८५ मा एमडी र सन् १९८८ मा साइक्याट्री विधामा विशेषज्ञता हासिल गरी विसं. २०४८ बाट सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेको हुँ ।
२. २०६४ देखि २०७४ मा अनिवार्य अवकाश अन्तर्गत सेवा निवृत्त नभएसम्म देशको एक मात्र केन्द्रीय मानसिक अस्पतालको प्रमुख (निर्देशक) भई कार्य गरेँ । मेरो संयोजकत्व र प्राध्यापकत्वमा २०६९ सालदेखि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (चिविराप्र) अन्तर्गत मानसिक अस्पतालमा एमडी साइक्याट्री (मानसिक रोग विशेषज्ञ) उत्पादन गर्ने पोस्ट ग्राजुयट प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो । तत्पश्चात ३ ब्याच गरी ५ जना एमडी साइक्याट्री डिग्रीप्राप्त मनोचिकित्सकहरू उत्पादन भएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी ‘मेडिकल कलेजमा अध्यापन’ नै नगरेको भन्नु गलत हो ।
३. मैले तात्कालिक सोभियत संघबाट साइक्याट्री विधामा विशेषज्ञता हासिल गरेको डिग्रीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर डिग्री सरह समकक्षस्तर निर्धारण गरिएको तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक परिषदले स्नातकोत्तर उपाधिको मान्यता प्रदान गरेको जानकारी गराउँछु ।
– प्रा.डा. सुरेन्द्र शेरचन, काठमाडौं
प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ ११:१७
मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर
कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘एउटै ऋणका १९ तमसुक’ समाचारले थोरै दुःखी र धेरै आक्रोशित बनायो  । हाम्रो मुलुकको व्यवस्था अझै पनि गरिबमैत्री हुन नसकेको महसुस गरायो  ।
अझै पनि गरिबको पसिना र इमानदारीमा कामचोर र ठगहरूको आजीविका चलिरहेको छ । यसले समाजमा हिंसा थपेको छ । र दिनदिनै हत्या र आत्महत्याको संख्या बढ्दै गएको छ । सर्लाहीको हरिपुरमा मात्र होइन कि मधेसको हरेक घर र बस्तीमा पाउन सकिन्छ, यस्तो समस्या ।
हाम्रो समाजमा अझै पनि गरिब गरिब नै र धनी धनी नै छन् । पहिला उब्जाउ जमिनको परिमाणका आधारमा गरिब र धनीको निर्क्योल हुन्थ्यो भने अहिले पैसा र पावरको हिसाबले ।गाउँघरमा गरिबसँग त्यत्रो पैसा हुँदैन । विदेश जानेदेखि विवाहमा दाइजो दिनेसम्म, बिरामी पर्दा उपचारदेखि चाडपर्व लगायत घरायसी ठूला समस्या टार्नसम्म साहुसँग ऋण लिनैपर्ने हुन्छ । जोसँग जमिन छैन, त्यसले ऋण पाउन मुस्किल पर्छ ।
जमिन हुनेहरूले साहु–महाजनबाट ऋण लिनुपरे तिनकै नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिनुपर्छ । त्यस बापत लिएको थोरै ऋणको तेब्बर लेखेर छुट्टै कपाली तमसुक पनि बनाउँछन् । मालपोतमा पास गराउनेदेखि फिर्ता गर्ने बेलासम्मको सारा खर्च ऋणीले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ । ऋणीलाई ऋणको खाँचो हुन्छ, चुइँ गर्न सक्दैनन् । साहु–महाजनले जे भन्यो, त्यही गर्छन् । अन्त्यमा आफ्नो हातै काटेर दिन्छन् । कुनै कारण साहुको पैसा समयमा तिर्न नसके कानुनी रूपमा जमिन हातबाट फुत्किन्छ नै, कपाली तमसुकका कारण मुद्दामामिला अदालती कारबाहीमा हालेर ऋणीको थप सम्पत्ति पनि हडपिने दाउ गर्छन् । कानुनलाई कागजी प्रमाण भए पुगिहाल्यो । सयकडा ३६ प्रतिशतमा लिएको ऋण फर्स्योट गर्ने बेलासम्म ५०–६० प्रतिशत ब्याजदर मागे पनि दिनुपर्ने हुन्छ । नदिए गाउँसमाजदेखि अडा–अदालतसम्म पैसा र पावरको चलखेल हुन्छ । यसरी धनी झन् धनी हुन्छन् र गरिब रोडमा पुग्छन् । त्यस्तो जमिन राम्रो ठाउँमा छ भने त साहु–महाजनले झनै गिद्दे नजर लगाइहाल्छन् ।
र त्यो जमिन हडपिने खेलमा लाग्छन् र सफल भएपछि त्यसैलाई बैंकमा राखेर कम ब्याजदरमा पैसा निकाली फेरि गाउँमा चर्को ब्याजमा लगाउँछन् । हाम्रो मुलुकमा ७५ प्रतिशत नागरिक गरिब छन् । बैंकहरूले गरिबलाई होइन, धनी र सम्पत्ति हुनेलाई मात्र ऋण दिने गरेका छन् । गरिबलाई साहु–महाजनको शरण नपरी सुखै हुन्न । अनि चल्न थाल्छ, मिटर ब्याजको अनन्त चक्र । सरकारले यस्ता मिटर ब्याजीहरूलाई यथाशीघ्र कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ ।
यो समाचार पढ्दा मेरो मुटु फुट्ला
जस्तो भयो । आफू पनि यस्तै अपराधी मनोवृत्तिको सिकार भइराखेकाले म निकै द्रवित भएँ । गरीब, दीनहीन, असहाय ती महिलाहरूको कहालीलाग्दो अवस्था पढेर मर्माहत भएँ । त्यो श्याम प्रदेशी भन्नेलाई कारबाही चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन ? कुन चाहिँ मधेसी नेताको समर्थन छ त्यसलाई ? नेपालको कानूनी व्यवस्था, विधि, प्रशासन र सम्मानीत न्यायालयसमेत त्यो अपराधीलाई समात्न असफल भएकै हो ? आफूलाई ‘शोषित पीडितको पार्टी’ भन्न रुचाउने सत्तारूढ नेकपाको समग्र संयन्त्र असफल भएकै हो ? आफ्ना छोरी, ज्वाइँ तथा नातागोता प्रयोग गरेर मिटर ब्याजको अपराध चलाउने त्यो श्याम प्रदेशी भन्नेलाई आजीवन कारावास होस्, सरकार ! नत्र हामी लाटासीधाको बांच्ने दिन सकिनेछ ।
– सुशीलकुमार गौतम, चन्द्रागिरि–१३, काठमाडौं
प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ ११:१५